TSELATRY NY FANAHY MASINA - Fihavaozana Karismatika katôlika fiombonana
Home »TSELATRY NY FANAHY MASINA
« Ary nisy koa olona nitondra zazakely ho eo aminy mba hametrahany tanana : fa nony nahita izany ny mpianatra dia niteny azy ireo. Nefa nantsoin’i Jesoa hankeo aminy kosa ireo ka nataony hoe : avelao hanatona ahy ny zazakely, ary aza sakanana izy, fa ny toa azy no hanana ny fanjakan’Andriamanitra. » (Lk 18, 15-16).
Isaky ny misy laretiretin’ny tanora (croisade des cœurs purs) sy kongresy nasionaly, dia misy foana ireo ankizy latsaky ny 14 taona manaraka ny zokiny na ny ray aman-dreniny mamonjy laretirety na kongresy. Mandritra ireny fotoana ireny dia toa zary lasa sakana ny ankizy tsy handehanana na tsy hifantohan’ny ray aman-dreny. Araka io tenin’i Jesoa io, izay azo lazaina fa nibedy ny mpianany mihitsy, dia izy ireny indrindra no ohatra velona ho antsika amin’ny fanjakan’Andriamanitra, satria ny zaza dia tsotra ary koa mahatoky. Noho izany, dia najoro ihany koa ny atao hoe : “TSELATRY ny Fanahy Masina”, sampana iray eo anivon’ny Fihavaozana Karismatika Katolika (sampana ho an’ny ankizy).
Tsy mbola misy ny rafitra lehibe sy mipetraka toy ny an’ny tanora sy ny an’olon-dehibe ho azy ireo. Ny tanora no miandraikitra azy ireo. Milalao, mivavaka araka izay vitany, ry koa fampianarana kely sahaza ny maha ankizy azy no omena azy ireo amin’izany.
Tany Ambositra, izay nankalazana ny ivon’ny jobily volamenan’ny Fihavaozana Karismatika Katolika maneran-tany, tamin’ny Kongresy volana Aogositra 2017 no tafajoro ny “Tselatry ny Fanahy Masina”. Tamin’izany no nandraisan’izy ireo anjara voalohany tamin’ny litorjia teo ambany fitarihan’ireo zokiny tanora. Nahafinaritra tokoa izany. Koa manomboka izao dia mandray anjara izy ireo amin’ny litorjia, eo ihany koa ny fandraisana azy ireo amin’ny alalan’ny lalao miaraka sy ny vavaka miaraka.
Koa manasa antsika ray aman-dreny sy zoky ary, mba hanampy azy ireo am-bavaka mba hananan’izy ireo fitiavam-bavaka lalina, mba hitombo fahendrena sy tena toa an’i Jesoa tao Nazareta fahiny, satria izy ireo tokoa no taniketsan’ny fiangonana. Izy ireo no ho avin’ny fikambanantsika.